BangEa - Fampidinana rindrambaiko varotra programa
Avereno ny voalohany
Tombontsoa sy fatiantoka
Tsena ara-potoana & baiko Pend
T/P amin'ny ankapobeny
S/L amin'ny ankapobeny
Fanidiana tontonana Fanohanana asa
Positive Add fetra
Mivadika Add Space
Mivadika Add Lot x
Mivadika Add fetra
Panel mandeha ho azy
Auto misokatra sy mihidy
Akatona ny fotoana
Hedg Symbol hafa
Pejy fandraisana forum
Maimaim-poana ny fampiasana ny rindrambaiko EA rehetra
EA dia fanafohezana ny rafitra ara-barotra mandeha ho azy, mpanolotsaina manam-pahaizana.
Software Trading Programmatic.
Fantaro ny varotra mandeha ho azy tanteraka amin'ny zoro K-tsipika
Fanontaniana napetraky ny namana tao amin'ny forum EA BANG ity. Raha ny marina, ity asa ity dia tsy mila atao ho famantarana, satria ny EA efa misy dia afaka mahatsapa izany. Misy fomba roa hanatrarana izany. Inona ny fisondrotry ny k-line? Izy io dia tsipika miforona amin'ny fampifandraisana N […]
Febroary 28, 2022
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny programam-barotra EA sy ny script
EA: Isaky ny miova ny vidiny, ny code ao amin'ny EA dia tanterahina indray mandeha; Script: Aorian'ny fandehan'ny script dia atao indray mandeha ihany ny code. Mba hahatakarantsika tsara ny fahasamihafana, Andriamatoa Tang ao amin'ny EA Bang dia nanoratra manokana EA sy script iray hanehoana, ny asany dia ny famoahana ny fotoana. […]
Febroary 25, 2022
Raiso ny adiresy IP an'ny mpizara varotra
Fepetra napetraky ny namana tao amin'ny forum EA State teo aloha izany. Nampiasa ny programmatic EA izy mba hivarotana matetika, ary ny paikadin'ny varotra dia ny karazana borosy. Fantatsika rehetra fa ny hafainganam-pandehan'ny fifanakalozana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny paikadin'ny fifampiraharahana matetika. Matetika izy no mampiasa VPS […]
Febroary 22, 2022
Miaraka amin'ny EA iray mitantana ny baikon'ny EA hafa, azonao atao izany.
Teo am-pampiasana varotra programa, efa sendra toe-javatra toy izany ve ianao? Ny toerana fanokafana ny aEA dia tsara kokoa, ary ny toerana mihidy ny bEA dia tsara kokoa. Mety tsara raha azo atambatra ireo EA roa ireo! Amin'ny ankapobeny, mampiasa 1 EA izahay hanokafana sy hanidy toerana. Raha te-hiatrika […]
Febroary 21, 2022
Mikasika ny fisie fanamafisam-peo amin'ny varotra programmatika, dia ampy ny mamaky ity lahatsoratra ity
Ahoana ny fampiasana ny fichier configuration an'ny EA? Nisy mpampiasa iray nampiasa ny Hedging EA an'i Bang EA ho an'ny varotra isan-karazany. Ny asan'ny rindrambaiko EA dia manankarena hatrany. Rehefa mandeha ny fotoana dia misy fiasa EA an-jatony, koa ampiasao fotsiny ny fepetran'ny tontonana mandeha ho azy hanokafana sy hanidy toerana. Ohatra, misy maro […]
Febroary 18, 2022
Azo itokisana ve ny baiko amin'ny fanaovana kopia mivadika?
Nandritra ny 10 taona teo aloha momba ny varotra simulated, ny paikady ara-barotra tsy tapaka dia nahatonga fatiantoka tsy tapaka, ary tao anatin'izany dia notanterahina araka ny paikady ara-barotra napetraka. Amin'ny tsena ho avy, ny mety hisian'ny fatiantoka dia tena avo tokoa, ary mety ho fatiantoka ihany koa. Raha manaraka ny paikady ara-barotra amin'ny […]
Febroary 14, 2022
Ny varotra EA dia mamonjy ho azy ny pikantsary
Fanamarihana: Ity lahatsoratra ity dia nafindra avy amin'ny www.eabang.com. Ity lahatsoratra ity dia lahatsary noraketin'i Mr. Tang. Ho an'ireo izay tsy tia mijery horonan-tsary dia azonao atao ny mamaky ny lahatsoratra. Ahoana ny fomba fakana sary ho azy rehefa manokatra sy manidy ny baiko ny EA? Ity asa ity dia fangatahana avy amin'ny mpikambana EA. Matetika izy no mampiasa transakta programmatika. Manana izy […]
Febroary 13, 2022
Ahoana no ahafantarana ny maha samy hafa ny andro bar sy ny macrocycle?
Ny fahasamihafana dia avy amin'ny endriky ny bar amin'ny vanim-potoana fixe d samihafa. Araka ny asehon'ny sary etsy ambany, toy ny tabilao 1 minitra sy ny tabilao isan'andro, maro amin'ireo tsipika K ao amin'ny tabilao 1 minitra dia mety manana TIC kely fotsiny. Mandritra ny vanim-potoana tsy mavitrika amin'ny karazany sasany tsy malaza, ny K-line 1 minitra dia miovaova […]
Janoary 11, 2022
Inona no tokony hataoko raha tsy manidy ny baiko ny EA
1. Tsindrio ny "Buy Open" na ny "Sell Open" ao amin'ny Panel fanokafana mba hijerena raha misy baiko feno. Raha tsy misy baiko vaovao, azafady jereo raha miditra ny mt4 sy mt5, ary raha "Algo Trading" ary "Avelao ny fanafarana DLL". Ny fametrahana EA 2. Raha misy baiko vaovao, ny baiko tsy mihidy dia tsy voatanisa, Apetraho [...]
Desambra 24, 2021
Hedg famantarana hafa
Ity fiasa ity dia ampiasaina amin'ny marika maromaro. Aorian'ny fiposahan'ny T/P amin'ny ankapobeny ao amin'ny tontonana fanakatonana, ny habetsahan'ny tombony azony dia manakana ny fatiantoka tantanin'ity EA ity ho an'ny lamina iray be indrindra, ary ohatrinona no azo hikatona; Pofit>0: Ny tombony amin'ireo baiko roa voafefy dia mihoatra ny 0; Ny fahaverezan'ny kaonty dia tsy maintsy>%:Fatiantoka mitsingevana/Fandrarana>5%.
pejy 1 pejy 2 pejy 3 ... pejy 19
Forum lohahevitra farany
Hedging EA v3.8.8.4 fampidinana sy fanavaozana ny famaritana asa
Ireo mari-pamantarana marika marobe, efa niasa nandritra ny 5 volana, ary ny tombony dia 50
Hedging EA v3.8.8.3 fampidinana sy fanavaozana ny famaritana asa
S/P ankapobeny ho an'ny tontonana fanakatonana
Miadana loatra ny backtest.
© 2022 BangEa. Namboarina tamin'ny fampiasana WordPress sy Lohahevitra ColibriWP .